Samitivej ဆေးရုံကြီးကို - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
Samitivej ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ပါ
Samitivej ဆေးရုံကြီးကို ၁၉၇၉ခုနှစ်ကတည်းက Kasikorn Bank ရဲ့ Iate Khun Bancha Lamsam နဲ့ M.R. Bajarisan Jumbala, M.D တို့မှ အတူပူးတွဲပြီး စတင်တည်ထောင်ခဲ့ရာအခုဆိုရင် အချိန်တစ်ခုထိတိုင်ခဲ့ပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အတော်ဆုံးဆရာဝန်တွေနဲ့ သူနာပြုတွေကို စုစည်းပြီး သူတို့ကိုအဆင့်မြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု နည်းပညာတွေ ဖြန့်ဝေပေးကာ လူနာတွေနဲ့လူနာတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူနာတွေကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေတင်မကဘဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုကိုပါ ဂရုစိုက်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ M.R. Kukrit Pramoj ဟာ ဆေးရုံနာမည်ကို “Samitivej” လို့ပေးခဲ့တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ “ဆရာဝန်တွေစုစည်းရာ” လို့ ဆိုလိုတာပါ။
Samitivej ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ တည်ထောင်သူတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ဆရာဝန်တွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူပေါင်း ၂,၀၀၀ လောက်ဟာ Samitivej ရဲ့ ဆေးရုံခြောက်ရုံမှာ လူနာတွေကို သာမန်အဖျားရောဂါကနေ ကြီးမားတဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ ကလီစာအစားထိုး လဲလှယ်မှုမျိုးကိုတောင် ပြုလုပ်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၉ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Samitivej ဆေးရုံဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေထဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံး ဆေးရုံကြီးတစ်ရုံ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပင်မဆေးရုံဖြစ်တဲ့ Samitivej Sukhumvit ဆေးရုံဟာအမှတ် ၄၉ Sukhumvit Soi မှာတည်ရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှမှာ အအောင်မြင်ဆုံး ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ Samitivej Sukhumvit ဆေးရုံဟာ ၂၇၅ ကုတင်ဆံ့ ဆေးရုံဖြစ်ပြီး အထူးကုပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာတွေရှိနေပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ အထူးကုအဖွဲ့တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားကာ ဂရုစိုက်မှုပေးမယ့်သူတွေဟာလည်း အတွေ့အကြုံများပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် Samitivej Sukhumvit ဟာ ရှေးယခင်ကတည်းက ဘန်ကောက်မြို့ လူထုကြီးရဲ့ ရွေးချယ်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ ဆေးရုံအနေနဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုထက်ပိုပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရှိတဲ့အပြင် နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပါ အမြင့်မားဆုံးသော ဂရုစိုက်မှုတွေနဲ့ ဘန်ကောက်မှာ လာရောက်နေထိုင်သူတွေအပြင် ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကနဦးအစမှစပြီး နောက်ထပ်ဆေးရုံငါးရုံကို အဖွဲ့ထဲသို့ ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့ အရှေ့ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Suvamabhumi လေဆိပ်နားမှာရှိတဲ့ ကုတင် ၁၅၄ လုံးဆံ့ Samitivej Srinakarin ဆေးရုံ၊ အပန်းဖြေမြို့ဖြစ်တဲ့ Pattaya မြို့နဲ့ Laem Chabang ဆိပ်ကမ်းအနားရှိ စက်မှုပါဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကုတင် ၁၃၈ လုံးဆံ့ Samitivej Sriracha ဆေးရုံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ Thonburi Province မှာရှိတဲ့ ကုတင် ၁၅၀ ဆံ့ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့ Samitivej Thonburi ဆေးရုံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ပိုင်းမှာရှိပြီး အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ ကုတင် ၅၇ လုံးဆံ့ Samitivej Chonburi ဆေးရုံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကလေးဆေးရုံဖြစ်တဲ့ Samitivej Children’s Hospital တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Samitivej ဆေးရုံဟာထူးချွန်တဲ့ အကောင်းဆုံးဂရုစိုက်မှုနဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ သမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၉ခုနှစ်မှာ Samitivej ဆေးရုံဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး WHO နဲ့ UNICEF က ပေးအပ်တဲ့ Mother and Baby Friendly Hospital အသိအမှတ်ပြုဆေးရုံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တခြားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များအနေနဲ့ ၂ဝဝ၄ခုနှစ်မှာ Prime Minister Award ကို Most Recognized Service အနေနဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ Hospital Accreditation Board of Thailand နဲ့ JCI မှ အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ဆေးရုံလဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကို ပြုလုပ်နေပြီးလူနာတွေ ဧည့်သည်တွေနဲ့ နားခိုသူတွေအားလုံးကို အမြင့်ဆုံးဂရုစိုက်မှုတွေ ပေးဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်နေပါတယ်။ အမြင့်ဆုံး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အရည်အသွေးမှီတဲ့ ဂရုစိုက်မှု၊ နောက်ဆုံးပေါ် ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေကိုပေးနိုင်ဖို့ ကတိပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် တာဝန်ယူမှုတွေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ ဆူနာမီလိုမျိုး ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူတွေကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေအပေါ်မှာ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှာပါရှိတဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။
Payothorn Decharin, M.D.
Kriangsak Saetia, M.D.